Gini bu ihe omuma ihe omuma? Egwu na-egbuke egbuke na nkume
Ihe omuma ihe omimi
Ihe omuma ihe omimi na-esi na ya esi enweta uzo na-emekorita ya na nkume di elu. Mkparịta ụka a ma ọ bụ ndabichi nwere ike ịbụ ụdị mgbasa ozi ọkụ, ntụgharị, ntụgharị, ntụgharị, absorption ma ọ bụ nnyefe.
Adularescence bụ ihe na-acha anụnụ anụnụ nke na-atụgharị uche n'elu domed cabochon nke Moonstone. Ihe omuma nke shimmer sitere na nmekorita nke ìhè na nkpuru nke obere kristal "albite" na moonstones. Okpukpo nke oyi kristal ndị a na-ekpebi ogo acha anụnụ anụnụ. Mkpa oyi akwa, mma -acha anụnụ anụnụ flash. Nke a na - apụtakarị dị ka mmetụta nchapụta ọkụ. Moonstone bụ orthoclase feldspars, aha ọzọ bụ "selenite". Ndị Rom kpọrọ ya Astrion.
Ndị na-atụtụ ọnụ ọchị na-ahọrọkarị ịkpụcha cabochon, mgbe nkume dị ala. Na nkume ndị dị otú ahụ na nkume mgbe ìhè na-adaba n'elu ụlọ mkpuchi ma na-eme ka ụzarị kpakpando, a na-akpọ ihe ahụ asterism. E nwere 4 ray na kpakpando ray 6 a na-ahụkarị. Nke a na - eme mgbe nkedo nke agịga dị ka ihe ndọtị ma ọ bụ silk n'ime crystal bụ na ihe karịrị otu axis.
Site na french aha "Nkata" pụtara pusi. Chatoyancy na-ezo aka n’otu ihe mepere emepe na imechi anya nwamba. Anyi nwere ike ile anya na nkpuru anya nke nkpuru anya nke oma. Igwe anya anya nwere otu nkọ dị nkọ, mgbe ụfọdụ, ìgwè abụọ ma ọ bụ atọ, na-agafe ihu domed cabochon. Nkume anya oke ohia nke cabochon na-egbutu oke nkata. Mkpụrụ ụkwụ kwụ ọtọ nke kristal nke nkume na-adabere na ihe ndị ahụ. Ya mere, mgbe ìhè dakwasịrị ya, a pụrụ ịhụ mmachi ahụ dị nkọ. N'okwu kachasị mma, anya nwamba chrysoberyl anya na-ekewa elu n'ime halves abụọ. Anyị nwere ike ịhụ mmiri ara ehi na mmetụta mmanụ a honeyụ mgbe nkume na-aga n'okpuru ìhè.
A na-akpọkwa ọkpụkpụ dị ka goniochromism, ihe a na-ahụ anya ebe ihe onwunwe na-egosipụta ọtụtụ agba dị ka ikiri elele mgbanwe. Ọ nwere ike ịhụ ya anya n'olu nke kpalakwukwu, ncha ncha, nku nke nru ububa, nne nke pearl wdg. Ụdị elu na nnukwu ohere interstitial na-ekwe ka ìhè na-agafe ma gosipụta azụ site na otutu (ọdịiche) na-eme ka ọtụtụ agba mmetụta anya. Tinyere ndabichi, nsonaazụ ya dị egwu. Nkume pel na-egosipụta nhicha nke dị iche na agba ya. Akwụkwọ pel Tahit na-egosipụta mmetụ dị ukwuu.
Play nke agba
Nkume dị ebube a na-akpọ opal na-egosipụta agba mara mma. Ọkụ ahụ sitere na Lightening Ridge, Australia (na-egosi mgbanwe ndị na-agbanwe agbanwe nke agba agba agba ojii) bụ ndị ama ama maka ihe a. Ọ bụ ezie na egwu a na-acha agba bụ ụdị nke iridescence, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ere ahịa nnukwu nkume na-akpọ ya “ọkụ” n’ụzọ na-ezighi ezi. Ọkụ bụ okwu gemological, ọ bụ mgbasa nke ọkụ na-egosipụta na nkume dị egwu. A na-ahụkarị ya na dayamọnd. Ọ bụ ìhè dị mfe. Bụrụ na nke opals ọ bụghị dispersion na ya mere, ọ bụ iwe iji okwu bụ “ọkụ”.
Ihe atụ kachasị mma nke mgbanwe agba bụ alexandrite. Ihe ndị a dị oké ọnụ ahịa na nkume dị iche iche na-acha ọkụ ọkụ ma e jiri ya tụnyere ìhè ụbọchị. Nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ihe ndị na-emepụta ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị ka nke ọma dị ka nke na-eme ka nchịkwa dị ike. Alexandrite na-egosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ìhè ehihie ma na-achakwa ọbara ọbara na ọkụ ọkụ. Sapphire, nakwa tourmaline, alexandrite na nkume ndị ọzọ nwere ike igosipụta mgbanwe agba.
Labradorescence bụ ụdị iridescence, ma ọ bụ nke ukwuu directional n'ihi twinning crystal. Anyị nwere ike ịchọta ya na nkume nkume labradorite.